Ftth Fiber Internet - EasyAds Myanmar
ရရှိနိုင်သောမြို့နယ်များ✅ 1.သန်လျှင် 2.သာကေတ 3.ဒေါပုံ 4.တောင်ဒဂုံ 5. ဒဂုံဆိမ်ကမ်း 7.တောင်ဥက္ကလာ 8.ဗဟန်း 9.ရန်ကင်း 10.တာမွေ 11. မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် 12.ပုဇွန်တောင် 13.ဗိုလ်တထောင် 14.ကျောက်တံတား 15.လမ်းမတော် 16.အလုံ 17.စမ်းချောင်း 18.ကြည်မြင်တိုင် 20. ကမာရွတ် 21. လှိုင် 22.လှိုင်သာယာ 23.အင်းစိန် 24.ရွေပြည်သာ ❇️တပ်ဆင်လိုပါက phone or viber - 09-884862343
တည်နေရာ : ရရှိနိုင်သောမြို့နယ်များ✅ 1.သန်လျှင် 2.သာကေတ 3.ဒေါပုံ 4.တောင်ဒဂုံ 5. ဒဂုံဆိမ်ကမ်း 7.တောင်ဥက္ကလာ 8.ဗဟန်း 9.ရန်ကင်း 10.တာမွေ 11. မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် 12.ပုဇွန်တောင် 13.ဗိုလ်တထောင် 14.ကျောက်တံတား 15.လမ်းမတော် 16.အလုံ 17.စမ်းချောင်း 18.ကြည်မြင်တိုင် 20. ကမာရွတ် 21. လှိုင် 22.လှိုင်သာယာ 23.အင်းစိန် 24.ရွေပြည်သာ ❇️တပ်ဆင်လိုပါက phone or viber - 09-884862343
Ftth Fiber Internet📶📶
😊ဘေလ်ဖိုးနဲ့မွဲနေပီလား Hello သာလုပ်လိုက်ပါ။
🔥လှိုင်းအပိုင်းလည်းအာမခံပါတယ်။ service လည်းပုံမှန်သွားပေးပါတယ်။
🔥စက်ဖိုး၊ ကြိုးဖိုး ၊တပ်ဆင်ခ၊ -Free😱
🔥သုံးလယူ (5mbp) အပိုလေ့ပေးတယ်😱
🔥Order တင်ပြိီး (5) ရက်အတွင်းတပ်
🔥1 လ Cash Down =10mbp😞
3လ Cash Down=10mbps 5mbps😱
6လ Cash Down=(6) (အပို 1 လ)😱
1နှစ် Cash Down=(12) (အပို2 လ)😱
🔥 After Sale service-72hours
Ftth Fiber Internet📶📶 😊ဘေလ်ဖိုးနဲ့မွဲနေပီလား Hello သာလုပ်လိုက်ပါ။ 🔥လှိုင်းအပိုင်းလည်းအာမခံပါတယ်။ service လည်းပုံမှန်သွားပေးပါတယ်။ 🔥စက်ဖိုး၊ ကြိုးဖိုး ၊တပ်ဆင်ခ၊ -Free😱 🔥သုံးလယူ (5mbp) အပိုလေ့ပေးတယ်😱 🔥ငွေကြိုလွဲစရာလဲ လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး 🔥စက်တပ်ဆင်ပြီးမှ ...